Jeneraal Yuusuf Indha Cadde oo Xil cusub loo magacaabay Durbana ka howl bilaabay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Jeneraal Yuusuf Indha Cadde oo Xil cusub loo magacaabay Durbana ka howl bilaabay Muqdisho
Warar lagu kalsoon karo oon helnay ayaa sheegaya in Jeneraal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde dhawaan loo magacaabay in uu noqdo Guddoomiyaha Guddiga Hanti soo celinta Ciidanka Soomaaliyeed.
Guddigan madaxa looga dhigay Sheekh Yuusuf Indha Cadde ayaa loogu tala galay in ay ka shaqeeyaan soo celinta hantida ma guurtada ah ee leeyihiin ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan dhismooyinka iyo xeryaha ciidanka ee kuyaala magaalada Muqdisho .
Waxaa durba magaalada Muqdisho ka howl bilaabay Guddiga Hanti soo celinta Ciidanka Soomaaliyeed kuwaa oo gaadiid dagaal oo lagu xiray codbaahiyaal ku tagayay dhismayaasha ee leeyihiin ciidanka dowlada iyaga oo ku amrayay dadka degan in ay isaga guuraan.
Guddigan cusub ayaa shacabka degan guryaha iyo xeryaha ciidanka gaar ahaan kuwa Milatariga u qabtay in ay uga guuraan maalmo kooban, waxaana dadkii ka madax adeega fulinta amarka loogu hanjabay in tilaabo laga qaadi doono lagana saari doono goobaha ciidanka.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan xeryaha iyo dhismooyinka ay lahaayeen ciidanka dowlada ayaa lasoo daristay walaac xoogan, waxa ayna sheegeen in aysan garaneyn meel ay aadaan hadii laga saaro guryaha ay hada ku nool yihiin.
The post Jeneraal Yuusuf Indha Cadde oo Xil cusub loo magacaabay Durbana ka howl bilaabay Muqdisho appeared first on Ilwareed Online.
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo Maanta ka furmaya Muqdisho.
Khayre oo Addis Ababa kula kulmay Wasiirka A. Dibadda Sacuudiga